Izindaba - Siyakuhalalisela ukuvulwa komenzeli wethu wase-India kwegumbi elisha lombukiso kanye nendawo yokugcina izimpahla
Siyakuhalalisela ngokuvula komenzeli wethu wase-India igumbi lokubonisa elisha kanye nendawo yokugcina impahla
Ngomhlaka 10th, Jan, 2020, umenzeli wethu e-India ubamba umcimbi omkhulu wokuvula igumbi labo lokubukisa elisha kanye nendawo yokugcina izimpahla. IMenenja Jikelele yethu uMnu u-Eric Wong, abamele umnyango nemishini kanye nochwepheshe bahambela lo mcimbi kanye nokusika iribhoni.
Umphathi omkhulu we-ejenti uqale enze inkulumo yokwamukela izihambeli ngokubonga izivakashi ngokuba lapha kwazo nokwethula ngegumbi elisha lombukiso nangombono wazo ngentuthuko yangakusasa. Uthi ukuthuthukiswa kwenkampani akukwazi ukufezeka ngaphandle kokuxhaswa kwamakhasimende kanye nokwesekwa kwabakhiqizi baseChina. Ukuthenjwa kwamakhasimende kungumfutho wabo futhi ukusekelwa kwamaShayina nokusekelwa kwensizakalo ukuzethemba kwabo.
Umphathi wethu uMnu u-Eric Wong naye wenza inkulumo yokuhalalisela. Utshela ukuthi sibheke phambili esigabeni esingcono kakhulu nesiphezulu phakathi komenzeli nathi. Sizoyeka noma yimiphi imizamo ukuxhasa nganoma yisiphi isici. Uchaza ngokukhethekile inzuzo yobuchwepheshe esibusebenzisela ulayini wokuxebuka. Singabokuqala ukusebenzisa ama-roller ukushayela kabili futhi ochwepheshe kakhulu futhi abanolwazi kulokhu kuze kube manje.
Izinto eziheha kakhulu ulayini womshini oxebukayo nemishini ehlobene ekhonjiswe phambi kwegumbi elisha lombukiso kanye namafulegi aseChina nawaseNdiya andiza esibhakabhakeni. Izinkulungwane eziningi zezivakashi ziza lapho kuvulwa khona futhi kubangela umuzwa eKerala. Amakhasimende amaningi kakhulu akhombisa intshisekelo yawo enkulu emishinini futhi enza uphenyo. Abaphathi bethu nochwepheshe basiza nokwethula imisebenzi yomshini, izinzuzo nokusebenza. Izivakashi zihlabeke umxhwele kakhulu ngobuchwepheshe obuphezulu bolayini wokuxebula izinkuni. Ngosuku olufanayo, i-ejenti yethu ithola okungenani amasethi angama-20 okuxebula ukuhleleka komshini futhi ithole kusengaphambili.
Njengesiko, ngemuva kokuphela komcimbi, ophethe izihambeli nezivakashi bathokozela isidlo sasemini esihle kakhulu futhi wonke umuntu utshela inzuzo enkulu kulokhu. Ukuvulwa kufinyelela esiphethweni esiyimpumelelo njengoba besethemba. Sifisela ukuthi umenzeli athole intuthuko engcono ezinsukwini ezizayo.
Isikhathi Iposi: Jan-10-2020